Soo-saaraha budada ee Shiinaha iyo Badeecad | Dinglong
Budadaheena silica waa qaabka silica ee silica wuxuuna leeyahay daahir kiimiko ah 99.3%. Budada silica waa mid adag, kiimiko ahaan aan firfircooneyn oo leh bar dhalaal sare, taas oo ka dhigaysa wax qiimo leh oo ku saabsan dalabyo kala duwan.
Adkaanshaha sare ee 7 (Mohs)
Iska caabinta kiimikada sare
Dinglong silica budada ayaa ah bur loogu talagalay in loogu isticmaalo codsiyada warshadaha. Sababtoo ah daahirnimada budada silica, adkaanta sare iyo iska caabinta kiimikada, waxaa badanaa loo isticmaalaa macdanta, elektaroniga, rinjiga dibedda, dhalooyinka iyo codsiyada diidmada ah.
Dinglong silica budada waxaa lagu dhisay qaab kristal ah. Budadaheena silica waa adagtahay, kiimiko ahaan firfircoon waxayna leedahay bar dhalaal sare, taasoo ka dhigaysa qalab wax ku ool ah oo qiimo badan ku leh dalabyo kala duwan. 99.3%, burkaan ayaa ah kuwo nadaafad iyo xoqan waxayna awood u leeyihiin inay ka caawiyaan macaamiisheenna inay dhisaan alaab nadiif ah. Dinglong wuxuu muhiimad weyn siinayaa dhisida iskaashi istiraatiiji ah iyo saaxiibtinimo macaamiisha. Waxaan aaminsanahay shey la isku halleyn karo oo macaamiisha ay ku tiirsanaan karaan waa wadada kaliya ee naga caawin karta dhismaha buundada.
Soo-saarista budada silica oo leh cabbirro walxaha cayiman ayaa u baahan geeddi-socodyada kala-soocidda marka lagu daro dhagax-shiid bilaa bir ah. Isticmaalidda isku-darka shiidi iyo teknoolojiyada indhaha, waxaan awood u leenahay inaan soo saarno budada quartz oo leh dhowr qaybood oo kala duwan oo loo qaybiyo iyadoo la adeegsanayo dhowr miino oo ku yaal goobta. Budada quartz Dinglong waxaa laga heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Budadahan quartz-ka ah waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Xiga: Budada Quartz
Iibso budada silica
Budada "Colloidal Silica"
Cosmetic Fasalka Silica Powder
Budada silica ee saafiga ah